Malmö Universitet oo loo hanjabay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jaamacadda Malmö Universitet. sawir: Johan Nilsson/TT
Malmö Universitet oo loo hanjabay
La daabacay fredag 5 januari kl 13.00
Jaamacadda Malmö ayaa maalinta isniinta xidhnaan doonta ka dib markii ay sheegeen in hanjabaad loo soo diray.
Hanjabaadan oo email lagu soo diray ayaa jaamacaddu u aragtay mid ay tahay in la rumeeysto. Jaamacaddu waxay sheegtay in hanjabaadu ku wajahan tahay ardayda jamacadaas, lana fulindoona maalinta isniinta.
-Waxaan u arkaa macluumaad muhiim ah, waxaanan go´aamiyey in jaamacaddu xidhnaato isniinta. Waana wax waajib ah in aan ardeyda iyo shaqaalaha amaankooda la siiyo ahmiyadda koobaad, ayay tidhi Kerstin Tham oo ah maamulaha jaamacadda Malmö "Malmö universitet".
Macluumaadka ku qoran hanjabaadan oo jaamacadda loo diray 29-kii deseember ayaan ilaa hada la baahin, balse booliska ayaa iyaguna sheegay in la soo gaadhsiiyey dacwad arrintan ku wajahan.
Maamulka jaamacaddan iyo booliska oo si wada jir ah, shir jaraa´id u qabtay ayaa sheegay in hanjabaaddu ay si cad ugu wajahan tahay maalinta isniinta. Waxa kale shirkan jaraa´id laga sheegay in hanjabaadan ugu horeyn la arkay 2 jeenaweri, inkasta oo emailka la soo diray 29 deseember, arrintan oo ay sababtay fasaxii sanadka cusub. Maalinta isniinta ayaa jaamacadda dib loo furayaa.